News – Page 1001 – Puntland Voice
Boliis ka kala tirsan Dowlada KMG iyo Maamulka Puntland oo Maanta tababar loogu soo afjaray Xerada Carmo
Carmo (AB):-Askar Boliis ah oo kala socday Dowlada KMG Soomaaliya iyo Maamulka Puntland ayaa Maanta tababar loogu soo gabagabeeyay xerada Carmo ee Gobolka bari,halklaasoo waqtiyadaan danbe ku caanbaxday in tababaro loogu sameeyo ciidamo Boliis ah. Wararka laga elayo xeradaasi Carmo […]
Dagaalo Saaka Muqdisho ku dhexmaray Xoogaga Islaamiyiinta iyo Dowlada KMG Soomaaliya iyo Xisbul Islaam oo guulo sheegtay
Muqdisho (AB):-Nawaaxiga isgoska Howlwadaaga waxaa saaka ka dhacay dagaalo u dhexeeyay Xoogga Islaamiyiinta Soomaaliya iyo Dowlada KMG Soomaaliya kaasoo la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan. Ma jirto khasaare si rasmi ah loo ogyahay oo soo gaaray shacabka iyo midka […]
Wasiiro ka tirsan Maamulka Somaliland oo is casilay
Hargeysa (AB):-Wararka laga helayo Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in Xalay waqti danbe ay casileen 2 ka tirsan Xukuumada Maamulka Somaliland kuwaasoo ka tirsanaa Xisbiga talada haya ee UDUB. Wasiirada is casilay oo kala ah wasiirada Madaxtooyada iyo Warshada ayaa caqbad […]
Amiirka u sareeya Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo ka hadlay arimaha Doorashooyinka Somaliland
Cajad maqal ah oo uu warbaahinta u soo direy Amiirka u sareeya Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab Sheekh Mukhtaar C/raxmaan Zubeyr ayuu kaga hadlay arimo ay ku jiraan qaar ururada islaamiyiinta ka mid ah oo ka weecday jihaadka sida uu sheegay amiirka […]
Bam Gaceed Xalay lagu weeraray Ciidamo ka tirsan Dowlad Goboleedka Puntland
Boosaaso (AB):-Wararka ka imaanaya Magaalo Xeebeedka Boosaaso ayaa sheegaya in xalay Bam gacmeed lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa Dowlad Goboleedka Puntland kuwaasoo marayay xaafada New Boosaaso. Inta la ogyahay 1 askari ayaa geeriyooday halka 8 kalana ay dhaawacyo ka […]
Xulka K/cagta Wadanka Ghana oo noqday Dalka kaliya ee Afrika ah oo u soo baxay wareega 2aad ee Koobk duunka
Ciyaartoyda K/cagta Ghana ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ama dalka kaliya ee Afrika ka socda oo u soo baxay wareega 2aad ee koobka aduunka kadib markii uu la yimid 4 dhibcood. Dhamaan 4-ta Dal ee ay Ghana iskula jireen Group-ka […]
Sh.Cali Dheere oo ka hadlay magacaabista Wakiilka Qaramada Midoobey ee arimaha Soomaaliya.
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa arimo kala duwan ka hadlay gaara haan magacaabistii wakiilka cusub ee Qaramada Midoobey kaasoo lagu badalay wakiilkii hore Axmed Walad Cabdala. Afhayeenka waxaa uu xusay in iyaga xoogooda aysan waxba isu […]
England iyo United States oo u soo talaabay Wareega labaad ee Koobka Aduunka
Waxaa galabta si rasmi ah ugu soo gubay wareega 2aad ee koobka duunka dalalka England iyo United States kadib markii ay kala adkaadeen dalalka Algeria iyo Slovenia. Kulamadii Galabta United States 1 – 0 Algeria Slovenia 0 – 1 England […]
Ururka Xisbul islaam oo Maanta tababar u soo xirey ciidamo gaaraya 1500
Ururka islaamiga ah ee Xisbul islaam ayaa Maanta Muqdisho ku soo bandhigay ciidamo tababar u soo dhaamada kuwaasoo tiradooda ay ku sheegeen inay gaarayaan 1500 askari. Ciidamada tababarka u soo dhamaaday oo ka tirsan Ururka Xisbul Islaamii ayay saraakiisha Urukaasi […]
Ururka Nabada iyo dib u heshiisiinta ee HANAD oo Maanta Gudoomiye cusub caleemo saartay
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa Maanta lagu qabtay Xarunta Ururka Nabada iyo dib u heshiisiinta Gobolka Banaadir ee HANAD,iyadoo munaasabadaasina ay isugu jirtay caleema saarka Gudoomiye cusub oo Ururkaasi uu yeeshay iyo xusida sanad guurdii 2aad […]